Cottage - Indawo kuyinto wokuqala nomkhulu kunabo bonke endaweni ukuze siphumuze ingqondo, ngokomzimba nangokwengqondo. Ngakho-ke, kufanele yini enakho kuphela ezidingekayo izinto zasekhaya, kodwa kahle ahlotshiswa. Njengoba izandla zakhe ukuhlobisa cottage, ngaphandle kokuchitha imali enkulu izimali? Kakhulu nje - ngokokuhlobisa, ungasebenzisa izinto ezingadingekile, ngalinye elikwazi ngekhono ngenxa ezingenza abe isici enkulu zokuhlobisa. Njengoba umkhuba ubonisa, ukungcola impahla etholwe emangalisayo, kodwa hhayi wobuciko landscape izakhiwo, kodwa yezandla ngempela yasekuqaleni futhi cute.
Ngokwesibonelo, imihlobiso yasekuqaleni ukunikeza izandla zakho siqu lingakhiwa ngisho kusuka ubudala ibhayisikili ibuthuntu. Ngo isiqu sakhe futhi isondo uhlele zezimbali enhle izimbali. Ukwakha engavamile imbali imibhede ngeke ivumelane futhi lesikhumba amapotimende ubudala, Ababazi bakha obhasikidi ezinkulu, imiphongolo amadala amanzi, izicathulo eyayivuza nokunye. Futhi izihlalo abavamile, babé yaphela indaba yalo, kungaba ukukhonza njengomdala ukuma kakhulu ngamalungiselelo imbali.
Indlela ukuhlobisa indlu ezweni ngezandla zabo ngosizo izitshalo? Ungakwazi ukuhlobisa indawo suburban ngokwemvelo isambulela oluhlaza. Ukuze lokhu kuyadingeka ukuze umbe phansi induku yensimbi, akha oyindilinga wire uzimele. Manje kufanele abeke yisiphi ukugibela esimila Ornamental, futhi engavamile engadini Ukwakheka ulungile! Kungenzeka futhi ukwakha lwaleli enhle futhi ephapheme, okwenza luhlaka ongaphambili omise, pre-kuqinisa emhlabathini.
Uma ucabanga ngokungathí sina ngokushada indlela ukuhlobisa indlu ezweni ngezandla zabo, isithombe yezandla Folk abaculi i-Internet, uzokunika phansi yokuzihlola. ethandwa kakhulu namuhla ukuba umbala engadini emgqonyeni, amatshe amakhulu futhi ezinkulu, uthango birdhouses, njll Ngaphezu izithombe elula elikhanyayo -. zikamanqulwane, izimvemvane nezimbali - ngalezi zindaba kungenziwa emelelwa wonke izithombe, futhi zizenza omuhle wobuciko.
Uma ungenayo i-ichibi kusayithi - akunandaba, ngoba izandla zakhe ukuhlobisa villa ungakwazi ukuhlela encane Echibini zokuhlobisa. Ukuze wenze lokhu kuzodingeka ukuba kunethonya amandla amaningi nokuzikhandla okukhulu, kodwa imiphumela cishe ukudumaza. Ezansi ichibi kumele okuhloswe ukubeka plastic noma irabha eteyipini, ogwini walala isitini eziphukile, kuvuleke Slabs noma izingcezu izitshalo itshe futhi zadekorirovat zokuhlobisa.
Uma emanzini amaningi usunayo, ungakwazi ukuhlobisa it nge zokuhamba encane. By the way, amabhuloho - namuhla ethandwa kakhulu cottage Decor isici. Basuke efakwe hhayi kuphela ekusakazeni kanye amachibi, kodwa ngisho phakathi imibhede zemifino.
Isici enkulu landscape design zonke izinhlobo amabhentshi nezihlalo wenza kusuka ugodo lwakhe siqu. Umdwebo engadini, zakhiwa izindlela ngokurhaba: kungekho masondo amadala ezimoto Ceramic nezitsha zobumba, noma amabhodlela epulasitiki - hhayi kuphela ukuhlobisa egcekeni, kodwa futhi ube lokubhalela okukhethekile kusayithi lakho.
Zonke emandleni akho! Manje ungenayo isikhathi sokucabanga ukuthi izandla zakhe ukuhlobisa cottage. Engingakusho nje kancane ukukhombisa umcabango futhi okwakhe ukuhlobisa indawo yakho ngezinto engavamile futhi ezithakazelisayo.
Ama-Corn Groats. Ummbila njengomkhiqizo wokudla
Ikhishi "Alenka": ezihlukahlukene onobuhle
Okungalapheki congestive prostatitis: Izimpawu kanye Ukwelashwa